Jesu Valero. Kubvunzana nemunyori weThe echo yemumvuri | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. Jesús Valero, Twitter nhoroondo.
Jesu Valero anobva kuSan Sebastián, Chiremba muBiological Sayenzi uye pari zvino ari kutarisira Technalia, iri repamusorosoro reR & D repakati kumaodzanyemba kweEurope Y munguva yake yekusununguka anonyora. With kufarira kwakanyanya munhoroondo dzekare neMiddle Ages, yakatanga mumabhuku ne Chiedza chisingaonekwe uye ikozvino wave nechikamu chechipiri, Maungira emumvuri. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye mutsa wakatsaurirwa izvi indavhiyu.
Jesús Valero - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Maungira emumvuri ingano yako yekupedzisira uye kuenderera kwe Chiedza chisingaonekwe. Chii chaunotiudza mairi?
JESU VALERO: Zviri nhau akaverengwa katatu. Marta, wezvekudzorera hunyanzvi, anowana bhuku rekare. Ndiyo dhayari yaJean, hunhu husinganzwisisike aigara muzana ramakore rechiXNUMX. Mune yangu novel isu tinoteedzera mauya evose vari vaviri, vanoedza kuvanza nekuwana a yekare relic kubva panguva yaJesu Kristu. Nenguva isipi ivo vese vanozoziva kuti vari kuisa hupenyu hwavo panjodzi uye kuti rekare relic chinhu chakagara chichichiviwa nechechi. Muverengi achawana nhoroondo inonakidza, yakagadzirirwa zvakakwana, uye ndichafamba nevatsigiri vekare mamonari uye scriptorium kuyedza kutsvaga makiyi akavanzwa mumachechi ekare nemanyoro.
JV: Ini ndinofungidzira ingave iri imwe nyaya ye vashanu kana ye Hollister. Ipapo ndakakurumidza kuzvinyudza mumabhuku eruzivo e Verne o Salgari ndisati ndawana pazera regumi bhuku rakaita kuti ndide kunyora: Ishe wezvindori. Nyaya yekutanga yandakanyora yave Chiedza chisingaonekwe. Zvakanditorera makore anoda kusvika makumi maviri kuti ndifungidzire nekuzvinyora. Ndokusaka, kunyangwe ari munyori mutsva, iri bhuku rine hunyanzvi rine zano rakaomarara asi riri nyore kutevera.
JV: Muhudiki hwangu pasina kukahadzika Tolkien. Zvino mukukura ndinoedza kuverenga zvese, chero munyori uye mhando. Zvinondibatsira kudzidza ndobva ndataura zvirinani nyaya. Kana ndichifanira kutaura kuti vanyori vangu vandinoda ndevapi, ndingati Murakami naPauro oyster. Nezvevanyori veSpanish ndaigona kunongedzera mazhinji, asi ndaizoratidzira kuti ndadzidza zvakadii kubva Perez-Reverte nezve mabatiro aanowanzoita zviitiko zvakaoma zvezviito.
JV: Zvakaoma kusarudza imwe. Pamwe ndingati Aragorn, ivo Ishe wezvindori. Iye musanganiswa weanoshamisira protagonist uyo ari wechokwadi kune zvaanoona zvepasirese, uyo ane chinangwa muhupenyu uye anotambura kuti azviite, asi asingadi kuzviita neimwe nzira. Iva ne kodhi yekukudza zvikuru pachako. Mumwe wevanyori vakuru ve Chiedza chisingaonekwe, iyo nhema knight, kunyangwe yaive yakasiana, ine mamwe eaya maitiro ayo anondinakidza kwazvo.
JV: Ini Ndinonyora neruoko, pamberi pekabhuku, ikozvino mune device izvo zvinondibvumidza kuti ndirambe ndichizviita asi zvinondipa mukana wekuti zvobva zvanyora runyoro rwangu uye zvigoisa manhamba pazviri zvakananga. Gare gare, mukugadzirisa, ini ndinozviitawo pabepa uye pandinenge ndanyora zvinyorwa chete ndipo pandinozivisa shanduko pakombuta, chimwe chinhu chandinodzokorora zvisingaverengeke kakawanda.
JV: Ndinoda ruzha rukuru rwakandikomberedza. Ndinonyora muzvitoro zvekofi, nhandare dzendege nemaresitorendi kana ndichifamba. Ndiri kungotsvaga iyo kunyarara kugadzirisa. Mumakore apfuura iniwo kazhinji ndinonyora muchikepe panguva yezororo. Anenge chetatu che Maungira emumvuri zvakanyorwa mukati memwedzi wese wandaive ndichivhura.
JV: Ndinoda zvinenge zvese. Rudzi rwacho haruna basa zvakanyanya kwandiri, ndinogona kuverenga enhoroondo enhau, matsotsi emanoja, fungidziro, sainzi ngano kana novel pasina murume Ini ndinodzidza kubva kune zvese uye ndinofunga zvinondibatsira kutaura zvirinani nyaya. Chaizvoizvo zvinondifadza zvinogara zvichichinja vanyoriIni ndinotora zvinhu zvakasiyana kubva kune yega yega.
JV: Iye zvino ndiri kuverenga zvimwe zvekare. Izvozvi ndiri kuverenga Ndangariro dzaHadrian naMargarite Yourcenar uye yapfuura yave iri Kunze kwenyika naAlbert Camus, iyo yandaida kuverenga mune yayo yekutanga French vhezheni. Nezve zvandiri kunyora, panguva ino Ini ndinofambira mberi neruzivo rwangu nyowani, iyo isati iine zita asi ichavhara chiuno kubva pachiedza chisingaonekwe uye maungira emumvuri. Ndinovimba kupedzisa pakupera kwegore, kunyangwe zvichitsamira pakuti ndinogona kunyora zvakawanda here muzhizha rino. Ndatove nefungwa dzimwe nyaya nhatu Ini ndoda kutaura, asi ini handizosarudze pane imwe yacho kusvikira ndapedza iyo yapfuura ndobva ndaendesa kune iye muparidzi.
AL: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa chiri sei? Vazhinji vanyori uye vashoma vaverengi?
JV: Pamwe ini handisi muenzaniso wakanaka wemamiriro ezvinhu. Kuburitsa zvinyorwa zvangu zviviri kwave kusiri kwehusiku kwandiri. Ndakanga ndisati ndamboburitsa kana kumboziva chero munhu munyika yekutsikisa, asi chinyorwa changu chakabva chakwezva kutarisisa kwaPablo Álvarez, mumiriri wangu weEdababundo. Pane imwe nguva zvanga zviri izvo, zvese zvakaenda nekukurumidza uye Carmen Romero anobva kuPenguin Random House akati hongu achingoverenga. Ndinoziva kuti kune vamwe vanyori zvese zvave zvakanyanya kuomarara uye pamwe zvinogona kunge zviri kwandiri mune ramangwana. Kurarama kubva pakunyora kwakaomesesa, vashoma chete ndivo vanogona kuzviita, uye ini handina hanya neizvozvo zviri kuitika. Ini ndinoda basa rangu uye kunyora kucharamba kuri chinhu chandinoda asi icho chandinoita pasina kumanikidzwa.
JV: Ini ndinoshandira zvakanaka kune chero mamiriro uye ini handina kumbosangana neiyi yakaipa zvakanyanya COVID. Ndine mukana: Ndiri microbiologist uye ndinonzwisisa zvinoitika uye chii chinogona kuitika zvakasununguka kupfuura vanhu vazhinji. Izvi zvese ndezvenguva pfupi uye tichakurumidza kudzokera kuhupenyu hwedu chaihwo. Izvo zvandiri kujekesa nezvazvo ndezvekuti mamiriro acho haasi kuzove sosi yekukurudzira yangu enganonyorwa, ini handisi kufarira nyaya iyi kubva ipapo maonero. Pane zvinhu zvirinani zvekunyora nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Jesu Valero. Kubvunzana nemunyori weThe echo yemimvuri